KHEYRE oo DF u jeediyey eedeyn la xiriirta GALAAL - Caasimada Online
Home Warar KHEYRE oo DF u jeediyey eedeyn la xiriirta GALAAL
KHEYRE oo DF u jeediyey eedeyn la xiriirta GALAAL
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre hadana ah musharax Madaxweyne ayaa maanta Muqdisho uga qeyb galay gogosha tacsida Alla ha u naxariistee Jeneraal Maxamed Nuur Galaal.
Jeneraal Galaal ayaa ka mid ahaa dadkii lagu dilay weerarkii ay todobaadyo ka hor Al-Shabaab ku qaadeen Hotel Afriik.
Waxuu intaas ku daray, “General Galaal wuxuu kamid ahaa saraakiishii ugu aqoonta, tababarka iyo darajo sareysay ee hogaamin jirtay ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed, ee lagu tilmaami jiray libaaxyadii Afrika. Wuxuuna sanadihii ugu danbeeyay ee noloshiisa ahaa odey waayo arag ah oo kaalin muuqato ku leh nabadeynta iyo dhab u heshiisiinta bulshada.”
Allaha u naxariistee Jeneraal Maxamed Nuur Galaal waxaa meydkiisa lagu aasay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, waxaana aastay ehelladiisa, waxaana dowladda lagu dhaleeceeyey in aysan sidii uu ka mudnaa u maamuusin meydka Jeneraalka.
Waxaa xusid mudan in madaxda dowladda federaalka iyo inta badan kuwa dowlad goboleedyada ay ku sugnaayeen Dhuusamareeb, markii meydka Jeneraal Galaal la geeyey Gurceel, taas waji gabax badan uu ka soo wajahay dhamaan madaxda Soomaalida oo maalmahaas shir ku lahaa Dhuusamareeb.